लकडाउनमा पनि जनताको सेवा गर्न बिहानै डिउटी हिडेकी नर्सलाइ एम्बुलेन्स ठक्कर दिंदा घटनास्थलमै निधन ! - Mitho Khabar
लकडाउनमा पनि जनताको सेवा गर्न बिहानै डिउटी हिडेकी नर्सलाइ एम्बुलेन्स ठक्कर दिंदा घटनास्थलमै निधन !
April 2, 2020 mithokhabarLeaveaComment on लकडाउनमा पनि जनताको सेवा गर्न बिहानै डिउटी हिडेकी नर्सलाइ एम्बुलेन्स ठक्कर दिंदा घटनास्थलमै निधन !
कोहलपुर नगरपालिका–११ मा रहेको होटल अतिथि अगाडि एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा एकजनाको निधन भएको छ । निधन हुनेमा मोटरसाइकलमा सवार कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया शोभा भट्ट रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ ।नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरबाट नेपालगञ्जतर्फ आउँदै गरेको भे१च ८२४ नंको एम्बुलेन्स र से५प ४८४ नंको मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएका थिए । मोटरसाइकल चालक नरहरिनाथ गाउँपालिकाका द्वन्द्वविक्रम विष्ट गम्भीर घाइते रहेको कोहलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिनुभयो । एम्बुलेन्स चालक बारबर्दिया नगरपालिका–६ का रामबहादुर थारू भने सामान्य घाइते भएका छन् ।
उनको निधन पछि गाउँ पालिकाले बिज्ञप्ति निकालेर उनको निधन भएको दुखद व्यक्त गरेको छ । बिज्ञप्ति तल पढ्नुहोस
मिति २०७६ साल चित्र १८ गते मगलबार बिहान ९:४० बजे यस बैजनाथ गाउपालिका प्रथामिक स्वास्थ केन्द्र बनकटवा बाँकेमा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा अन्तर्गत अ.न.मि पदमा कार्यरत श्री शोभ कुमारी बटाला बिहान कार्यालय आउने क्रममा कोहलपुर नगरपालिका कोहलपुर शिक्षण अस्पतालको अगाडी बिपरित दिशाबाट आइरहेको एम्बुलेन्सले ठक्कर दिंदा घटना स्थलमै नै निधन भएको खबरले हामी दुखित भएका छौ । एउटा इमान्दार र होनाहार कर्तव्यनिष्ट रास्ट्र सेवक कर्मचारीको कर्तव्य पालनाको शिलसिलामा असामयिक निधन भएको छ ।
साथै हाल बिश्व्भर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाका भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यालय आउने सिलसिलामा भएको निधनले हाम्रो गाउँपालिकालाइ अपुरणिय क्षति भएको छ । उँहाको असामैक निधनमा दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना । उक्त घटनाका घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ महेन्द्रजंङ शाही / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
त्यस्तै सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा–६ घोपाली टोलमा एम्बुलेन्सको ठक्करबाट एकको निधन भएको छ । निधन हुनेमा इनरुवा–६ मधेशाकी ३५ वर्षीया रत्ना श्रेष्ठ रहेको सुनसरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक विनोद शर्माले बताउनुभयो ।पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत घोपाली टोलमा को १ च ९६०५ नं को एम्बुलेन्सले को १६ प २०६४ नम्बरको स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा स्कुटीमा सवार श्रेष्ठको ज्यान गएको प्रहरी नायव उपरीक्षक शर्माले बताउनुभयो । मृतक श्रेष्ठ मधेशा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । ठक्कर दिने एम्बुलेन्स र चालक मोरङ सुन्दरहरैचाका ४० वर्षीय चन्द्र राई प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
यूके पाउण्ड र कुवेती दिनारको भाउ बढ्यो
February 27, 2020 mithokhabar